TAFA-PIFIDIANANA : Omer Beriziky sy Paul Rabary -
AccueilRaharaham-pirenenaTAFA-PIFIDIANANA : Omer Beriziky sy Paul Rabary
06/10/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Antsika i Madagasikara
Hanarina sady hanorina
Ny hanamafy ny fametrahana ny tany tan-dalàna no anisan’ny tanjona iray lehibe ao anatin’ny vinan’ny kandidà Jean Omer Beriziky laharana faha-19, izay natolotry ny antoko, Antsika i Madagasikara amin’izao fifidianana filoham-pirenena izao. Anisan’ny nampanjakana ny gaboraraka eto amin’ny firenena hatramin’izay mantsy ny tsy fitovian’ny olom-pirenena rehetra teo anatrehan’ny lalàna. Tsy tokony hisy ambonin’ny lalàna anefa na iza na iza, fa samy hiharan’izany avokoa rehefa manao ny tsy mety raha ny fanazavany. Ny fametrahana ity tany tan-dalàna ity, araka izany no fototra hisian’ny fandrosoana sy ny filaminana eto amin’ny tanindrazantsika raha ny nambarany.
Zava-dehibe ihany koa ny famerenana ny fifampitokisana eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka, ka tsy natao tsinontsinona, ary anisan’ireo laharam-pahamehana ao anatin’ny fandaharan’asan’ity Kandida natolotry ny antoko Antsika i Madagasika ity. Iaraha-mahalala tokoa mantsy fa vato misakana ny fampandehanan-draharaham-panjakana hatramin’izay ny tsy fisian’io fifampitokisana io. Hany ka mora ho an’ny vahoaka malagasy no nandray ireo tsaho ninian’ny sasany naparitaka rehefa te hanaratsy ny mpitondra izy ireo. Ilaina araka izany ny famerenana indray ny fifampitokisana eo amin’ny vahoaka sy ny mpitondra, hialana amin’izao fahantrana lalina mianjady amin’ny vahoaka malagasy izao raha ny nambarany.
“Tombony ho ahy ny fahasahiako nijoro tamin’ny fahamarinana tamin’ireo sehatra rehetra niasako, ary mbola tohizako hatramin’ny androany” hoy ny kandidà laharana faha-19 ao anatin’ny bileta tokana. Tsy manana taratasy na dôsie maloto ihany koa nandritra ny fotoana naha tompon’andraikitra teo amin’ny fitantanana ny firenena. Nilaza ihany koa ity kandida ity fa nahavita ireo andraikitra nankinin’ny firenena taminy, tamin’ireo sehatra rehetra nanendrena azy.
Homena vahana amin’ny alalan’ny famoronana asa sy orinasa ihany koa ireo tanora malagasy amin’ny fotoana hitantanany ny firenena, raha ny fanazavany. Tsy ny ety an-drenivohitra ihany fa omena vahana ihany koa ireo any amin’ny tontolo ambanivohitra. Noraisin’ny Kandidà Jean Omer Beriziky ho zava-dehibe ao anatin’ny fandaharan’asany ihany koa, ny fanaovana ny lalàna manerana an’i Madagasikara. Izay ihany mantsy aloha hatreto no ahafahan’ny vahoaka mifamezivezy, indrindra ahafahana mamoaka ireo vokatra rehetra misy eto amin’ny firenena raha ny fanazavany.
Farany nanentana ny olom-pirenena rehetra hanefa ny adidiny amin’ny amin’ny alalan’ny latsa-bato ity Kandidà ity amin’ny faha- 7 Novambra izao. Nanentana ny olom-pirenena hahay hifidy izay olona manana traikefa amin’ny fitantanana ny firenena ihany koa. Na izany aza, nilaza i Jean Omer Beriziky fa mampanahy ny ho avin’ity fifidianana ity, noho izy tsy misy lalàna mazava mamaritra azy. Any Toliara kosa no faritra nosafidiany hanaovana ny fanokafana ny fampielezan-kevitra aamin’ny alatsinainy izao.
Kandidan’ny fitsitsiana ho an’ny vahoaka
Nandritra ny firesahan’ny kandidà Paul Rabary, laharana fahavalo anatin’ny bileta tokana, tamin’ny dina niarahany tamin’ ireo vehivavy tetsy amin’ny St Michel Amparibe, no nilazany fa “ ny fanohanana ireo vehivavy sy tanora, ary koa ny fitsitsiana no ahafahan’ny firenena miarina sy tafavoaka amin’izao fahasahiranana manjo an’i Madagasikara” izao. Kandidà mahitsy fiteny, tsy miholankolana, ary mandray andraikitra avy hatrany no nahafantarana ny kandidà Paul Rabary fony izy minisitra. Hiarahan’ny rehetra mahita, fa na mpiambina aza tsy hananany fa dia izy sy ny kodiaran-droa, na moto no mpinamana. Ity kandidà ity, izay efa nahavita mihitsy nitety an’i Madagasikara tamin’ny alalan’ny kodiaran-droa. Nentiny nanaporofoana ny fitsitsiana tiany hapetraka izany, na dia mbola nanana ny fahefana maha minisitra azy aza ny tenany.
Ny fitsitsiana izay hapetraky ny kandidà Paul Rabary, dia hisy fiantraikany mivantana amin’ny vahoaka. Satria ireo vola lany amin’ ny fitantanam-panjakana, dia atobaka ho an’ny sosialim-bahoaka sy ny fampandrosoana, “mitsitsy ao amin’ity fanaovana fampielezan-kevitra ity, ary mitsitsy ao rehefa hitondra… Izaho dia kandidà vonona hiafy, ahafahan’ny vahoaka mivelatra sy miadana” hoy izy raha nanontaniana. Ahafahana tonga amin’izay fifitsitsiana izay, ho tombontsoan’ny vahoaka , dia ho foanan’ny filoha Paul Rabary avokoa ireo fandanindaniam-poana hoy izy “ foanako daholo ny fandaniam-poanan’ny fanjakana rehetra , minisitra 30 teo , ho lasa 15 sisa raha izao no tonga eo. Foanana ihany koa ny senat, primatiora, fiaram-panjakana 4×4 amidy daholo”. Sahy nametraka fanamby amin’ ny tsy handaniana vola amin’ny fivoahana any ampita sy fanafoanana ny fiaraha-misakafo eny Ivaloha, ity kandidà laharana faha-8 ity, “Fandehanana mankany ampita, izaho no filoham-pirenena malagasy tsy hivoaka any ampitan-dranomasina, ary tsy hivoaka an’i Madagasikara mandritra ny dimy taona. Fisakafoanana ao Iavoloha , cocktail tsy misy intsony izany. Izaho no filoham-pirenena vonona hiafy ho anareo ahafahantsika mandroso” hoy ny fanazavany. Nambarany tamin’ izany fa “Fanjakana mitsitsy no afaka mitsinjo ny vahoaka”.
Ampanjakana ny miralentan’ny kandidà Raul Rabary eto amin’ny firenena, satria nambarany fa efa tara isika eto Madagasikara raha oharina amin’ i Afrika. Noho izany ny seza rehetra izay zaraina eto Madagasikara hoy i Paul Rabary dia hizara mira ho an’ ny lahy sy ny vavy, “satria misy eto Madagasikara hono izany hoe fizaran-tseza izany. Ireo olona rehetra tendrena na décret na arrêté, dia hosoratana amin’ ny lalàm-panorenana, fa ny antsasany vehivavy, ary ny antsasany lehilahy” hoy izy. Nohazavain’ny kandidà laharana faha-8 mazava, io miralenta hapetrany io eto, “ raha misy minisitra 15 tendreko dia ny valo amin’ ireo, na ny fito amin’ ireo dia vehivavy avokoa. Izany hoe ny chef de service, directeur, sekretera jeneralin’ny minisitera tsy maintsy ahitana fa misy ny miralenta”. Tsy ny asa anivon’ny fitondram-panjakana ihany anefa no hametrahana izay miralenta izay, fa ampirisihina ihany koa ny tsy miankina, “Tahaka izany koa ny tsy miankina, izay tsy azo terena, fa kosa ny orinasa rehetra izay mametraka izany fomba izany, dia hahazo ilay antsoina hoe “allègement fiscal”, hoy hatrany ny fanazavany.
Faharoa anatin’ny tetikasan’ny kandidà Paul Rabary, ny tsy maintsy hijerena manokana ny vehivavy, “isika efa hametraka ilay hoe “couverture santé universelle”, io izay tsy tokony handoavan’ny olona sarany tahaka ny fanafody sy ny vonjy aina. Alohan’ny hahatongavana amin’io “couverture santé universelle” io, ny vehivavy rehetra mandra-pahatongan’ny fiterahany, dia tsy mandoa vola eny amin’ny hopitaly intsony. Na io échographie, na fanafody, na fiterahana” hoy izy. Fahatelo kosa dia tafiditra anatin’ny tetikasan’i Paul Rabary ihany koa raha izy no ho lany eo, ny fanamorana ny andavanandron’ny vehivavy, amin’ny tsy fampiasana taratasy intsony, “hamoraina ny andavanandron’ny vehivavy rehetra, amin’ ny tsy fampiasana taratasy intsony, fa teknolojia no ampiasaina. Io izay hapetraka isaka ny fokontany, izay ahafahana ihany koa manisa ny olona eny hifotony sy ahafantarana azy ireo, io ilay antsoina hoe dématérialisation ny service publique tsy mila taratasy intsony, ary ny vehivavy no afa-pahasahiranana indrindra” hoy ny fanazavana. Raha miasa sy afaka mamelon-tena ireo vehivavy ireo, dia mandroso madagasikara, hoy ny kandidà laharana faha-8 namarana.